Umu-sibyaanada wixii laga aaminsanaa iyo Waxa Aqoonta Science-ku caddaysay! Qalinkii: Sadam Osman Kaabash. • Oodweynenews.com Oodweyne News
Umu-sibyaanada wixii laga aaminsanaa iyo Waxa Aqoonta Science-ku caddaysay! Qalinkii: Sadam Osman Kaabash.
News DeskOctober 11, 2019
Waxaan qoraalkan kooban idiin kula wadaagi doonaa “Ummu-sibyaana”
Taas beddelkeeda waxa dhaqankeena ku jirtay in gabdha caynkaas ah ay durreeyeen Junuud, una baahantahay in loo geeyo wadaad Quraan-saara. Junuudaas Somalida waxay u taqaanaa Umu-sibyaana. Wadaadka keliya ee la aaminsanahay in uu daaweeyaana waa mid yaqaanna cilmi-shaydaanka iyo qardhaasaha layska laalaadiyo. Dumarka caynkan ah waxa uu u qoraa qardhaas ay ku xardhanyihiin xuruuf iyo tirooyin abla-ablayntoodu aanay isku xigxigin, lagana soo dheegtay kitaabo laga soo waarido Eeraan oo ay qoreen faarisiyiintii hore. Sidoo kale waxa lagu qoraa magacyo lagu nisbaynayo in umu-sibyaana ay leedahay. Qardhaastan waxa loo laalaabaa si’ ay isla yaqaanaan, waxa lagu guntaa dun, waxaana lagu xidhaa dhexda gabadha xanuunkan ka cabanaysa.
Aan soo qaadanno hadal la sheegay in laga soo weriyey Nebi Sulaymaan: Nebi Sulaymaan waxa uu yidhi, “Anoo la socda koox saaxiibaday ah, maalin maalmaha ka mid ah anoo saaran dabayl, shibrina ii hadhaynayaan, malaga Mii’kaa’iilna midgtayda joogo, Israafiilna bidix dayda, Jibriilna hortayda, gadaashayda danbena Cazraafil. Waaba gabadh nacnadan oo layidhaahdo Umu-sibyaana-oo timo fidsan, af-ballaadhan, gacan dheer, miciyo fiiqfiiqan, ilko huruuda leh, afkeedana qiiq naari ka soo holcaayo. Miciyaheedana dhulka ku baadhbaadhaysa, codkeeduna sida danabka ku qaadayo indhaheeduna sida hillaaca ku cawarayo. Waan daymooday. Waxaanan ku idhi, “Tumaad tahay taadan lacnadaneey? Dariiqa kumaan arag wax kaabahalsan, kaa arag xun midab ahaan: ma jin, insi ama shaydaan ayaad tahay?.
Waxay tidhi, “Aniga rabbigay ayaa ii sakhiray iguna salliday ilma bani-aadam. Nebi Sulaymaan waxa uu ku yidhi, Waxaa suuro ah in lagu xidho, xabbad lagu gu dhufto, naxaasta adagna lagu gu dhalaaliyo si’ lagaa ga qariyo ilmo aadam!. Waxay ku jawaabtay, “Nebigii ilaahayaw! Ha i xidhin, ha na i ciqaabin, waxaan ahay mid amran: waxaan sameeyo waxaan u sameeyaa amarka Alle, qofkii naftiisa dulmiya ee aan xirsi xidhqaadana waan ku samaynayaa.
Nebi Sulaymaan waxa uu waydiiyey, ‘Waa maxay xirsi xidhku?’. Waxay tidhi, “Waa kitaab ay ku qoranyihiin magacyada iyo dhammaan sifooyinkiisu”. Waxuu sulaymaan waydiiyey: waa immisa magacyadaadu?. Waxay tidhi: Nebigii Allw, xaqqa Allaan ku dhaartee, Alle isaga mooyee aan cid kale xaq lagu caabudin, ogsoon caalamka muuqda iyo ka qarsoon, been sheegi maayo! Waxaan leeyahay 14 magac sida: Juluusha, Qabruusha, Xaraasha, Xawaasha, Haymuusha, Famruusha, Qawsha, Shucuusha, Martaluusha, Garbaquusha, Xarbacuusha, Umu-basiila, Umu-malduuma, Saluhamuusha, Naquusha, Barduuma, Bintu-riix, Bintu-riyaax, Bintu-hamaam, Bintu-wahiim, Yaxsabwaama iyo Umu-sibyaana”.